Anelka Oo Ka Warray Sidii Uu Diinta Muslimka u qaatay iyo Mushkiladaha Haysta Muslimiinta
HomeWararka MaantaAnelka Oo Ka Warray Sidii Uu Diinta Muslimka u qaatay iyo Mushkiladaha Haysta Muslimiinta
Laacibka Nicolas Anelka oo ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee soo maray kubadda cagta wadanka France ayaa ka hadlay mushkiladaha ka jira dunida Muslimka, qaabkii iyo wakhtigii uu Islaamay iyo sida ay dunidu ula dhaqanto Muslimiinta.
Anelka waxa uu sheegay in Muslimiinta in dalka France ay si xun ula dhaqmaan Muslimiinta halkaas oo ay cadaadis iyo takoor kala kulmaan.
Anelka waxa uu sheegay in dadka loo garto Carabta ay dhibaato badan kala kulmaan bulshada ku dhaqan wadanka France isla markaana nacaybkaasi sii kordhayo iyadoo waliba ay adag tahay in shaqo uu dalkaas ka helo qof Muslim ah.
“Haddii aad codsi shaqo u qorato shirkad adigoo ah Muslim, xattaa lama eegayo codsigaaga sababtoo ah diintaada Muslimka ah, taasina waa takoor.” Sidaas ayuu yidhi Anelka.
Anelka waxa uu intaa ka dib ka sheekeeyey sidii uu u Muslimay, dadkii ka caawiyey iyo sababtii uu u qaatay diinta Islaamka, waxaanu yidhi: “Waxaan la soo koray saaxiibo ka jeeda Algeria oo aan ka bartay rukunnada Islaamka. Waan la soomi jiray, markaas ayaanan qaatay diinta Islaamka, waayo waxa aan dareemay in ay tahay diin igu habboon.” Sidaas ayuu yidhi Anelka.
Khabiirkan khadka weerarka oo u soo ciyaaray kooxaha Arsenal, Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid, Chelsea, Fenerhabce ayaa aakhirkii xirfaddiisa u guuray wadanka China halkaas oo markii uu ka ciyaarayey muddo sannad ah uu haddana dib ugu laabtay Yurub oo uu markii dambe kaga fadhiistay ciyaaraha.
Kooxda Bayern Munich Oo Deeq Balaadhan U Fidinaysa Qaxootiga Ku Nool Germany
05/09/2015 Samatar Mohamed
Ronaldo, Benzema Iyo Griezmann Oo Inkaartii Gool La’aatu Kusiii Badatay Iyo Barbar Dhac Ay Kooxahoodu Ku Kala Baxeen
18/11/2017 Diiriye Ahmed
Burnley 0-1 Arsenal – Highlights & Goals
26/11/2017 Abdiwahab Ahmed